🥇 ▷ Telefoonnada leh Idaacadda FM ee sannadka 2019, waa kan ugu wanaagsan nooc kasta ✅
Telefoonnada leh Idaacadda FM ee sannadka 2019, waa kan ugu wanaagsan nooc kasta
Tan iyo markii taleefannadii ugu horreeyay ee soo muuqday iyo xitaa markay yimaadeen taleefanka casriga ah, Reedyow FM wuxuu noqday shay lagama maarmaan ah. Si kastaba ha noqotee, sannadihii la soo dhaafay, noocyada waaweyn ayaa go’aansaday inay ku faafiyaan sheygan qalabkooda, gaar ahaan heerarka sare (marka laga reebo Samsung), sidaa darteed helitaanka taleefannada mobilada leh shaqadan waxay noqdeen hawl adag.
Waqtiga xaadirka ah, haddii moobiilkeenu aanu lahayn raadiyaha FM, si aan u dhagaysanno waa inaan adeegsanaa codsi ku shaqeynaya khadka internetka, gka yaabinta xogta heerkayaga Taasi waxay ku jirtaa. Sidaa darteed, haddii aad tahay idaacad jecel idaacadda, waanu kuu soo bandhigaynaa, Mobilada ugu fiican ee aad ka iibsan karto raadiyaha FM noocyada ugu caansan ee loo yaqaan.
Samsung way ku faani kartaa in ay sii haysato raadiyaha FM-ka wax ku oolka ah oo dhan ee ah Galaxy sare iyo dhexdhexaad, sidaa daraadeed in sare ee shirkada, sidoo kale Galaxy Note + aan la waayey. Waxaa ka mid ah astaamaha ugu cajiibsan ee ay ka mid yihiin shaashadda 6.8-inji AMOLED QHD +, shaashadda cusub ee Exynos 9825 iyo sidoo kale kamarad gadaal gadaal ah.
Iibso Samsung Galaxy Note 10 + qiimaha ugu wanaagsan Amazon
Xiaomi’s mobile-kii ugu dambeeyay ee ugu dambeeyay illaa maanta, Mi 9T Pro, wuxuu sidoo kale leeyahay raadiyaha FM-ka mid ka mid ah astaamaheeda. Qiimo ahaan dhaqaale ahaan, waxaan ku heli karnaa terminal leh shaashad 6.4 inji ah AMOLED, mashiinka Snapdragon 855, batteriga 4000 mAh, kamarad gadaal saddex-laab ah iyo kamarad hore oo soo baxda.
Iibso Xiaomi Mi 9T Pro qiimaha ugu wanaagsan Amazon
Motorola One Zoom, waa mobilada ugu casrisan uguna awooda badan shirkada Mareykan ee sanadkaan 2019, waxaana kamid ah astaamaheeda, sidookale waxay leedahay raadiyaha FM. Qalabkan cusub ee Motorola waxaa lagu gartaa dareemahiisa labajibbaarane oo ah 48 MP + 16 MP + 8 MP + 5 MP iyo bandhigiisa weyn ee OCD oo ah 6.4 inji.
Iibso Motorola One Zoom qiimaha ugu wanaagsan Amazon
Mate 20 waa mid ka mid ah marinnada ugu wanaagsan Huawei sanadkii la soo dhaafay waxaana ka mid ah waxyaabaha sida gaarka ah loo xushay sidoo kale wuxuu leeyahay raadiyaha FM. Intaa waxaa dheer, waxaa hadda laga heli karaa qiimo aad u dhimis ah, sidaa darteed waxay noqotaa badeecad soo jiidasho leh. Waxaa ka mid ah astaamaheeda, waxay u taagan tahay shaashaddeeda 6.53 inji oo OLED ah, processor-ka Kirin 980 iyo kamaradiisa gadaal sare ee seddexda-heer.
Iibso Huawei Mate 20 qiimaha ugu wanaagsan Amazon
Oppo Reno Z waa telefoon casri ah oo ku dhex jira badhtamaha hadda jira. Qalabkani wuxuu u taagan yahay Snapdragon 710 CPU, labadiisa 48 MP + 5 MP camera, shaashaddiisa 6.4 inji ee AMOLED iyo, dabcan, joogitaanka raadiyaha FM-ka. Intaa waxaa sii dheer, waxay leedahay qiimo cadaalad ah oo xiiso leh, sidaa darteed waxay noqon kartaa badeecad iibsasho habboon.
Iibso Oppo Reno Z qiimaha ugu fiican Amazon
Nokia 8.1 ayaa ugu dambeyntii loo midoobey sida moodada ugu caansan ee soo saaraha badhtamihiisa soo bandhigida dhamaadka 2018. Waxay u taagan tahay jiritaanka qalabka loo yaqaan ‘Snapdragon 710 processor’, dualkiisa 12 + 13 megapixel gadaal, iyo sidoo kale joogitaanka of Android 9 Pie oo ka hooseeya lakabka Android One, isagoo ah mid ka mid ah moobiillada ugu sarreeya, illaa iyo hadda si loogu daro. Dabcan, ma waayi doonno idaacadda FM haddii aan rabno inaan qabsanno.
Iibso Nokia 8.1 qiimaha ugu wanaagsan Amazon